Maamulka Sare Ee Kooxda Barcelona Oo Ka Hadlay Xaqiiqada Wararka Sheegaya In Uu Neymar U Sheegay In Uu Doonayo In Uu Ku Soo Laabto Barcelona – Kooxda.com
Home 2018 March Spain, Wararka Maanta Maamulka Sare Ee Kooxda Barcelona Oo Ka Hadlay Xaqiiqada Wararka Sheegaya In Uu Neymar U Sheegay In Uu Doonayo In Uu Ku Soo Laabto Barcelona
Maamulka Sare Ee Kooxda Barcelona Oo Ka Hadlay Xaqiiqada Wararka Sheegaya In Uu Neymar U Sheegay In Uu Doonayo In Uu Ku Soo Laabto Barcelona
Maamulka Sare ee kooxda Barcelona ayaa ka hadlay in ay qaar ka mid ah xiddigaha kooxda Barcelona ka hadlayaa ku soo laabashada Neymar ee kooxda Barcelona xilli af hayeen u hadlay maamulka kooxda si cad uga hadlay arintas isaga oo sheegay in uuna miiska saarnayn wax dalab oo arintaas ku saabsan.
Xiddiga reer Brazil ayaa lagu soo waramayaa in uuna ku farxsanayn kooxda PSG oo uu doonayo in uu ku soo laabto kooxda Barcelona taas oo keentay in ay xiddigaha Ivan Rakitic & Philippe Coutinho dhawaan sheegeen in ay dib ugu soo dhawayn lahaayeen Neymar kooxda Barcelona.
“Kama war qabno in uu Neymar doonayo ku soo laabashada Barcelona”ayuu uu yiri.
“Neymar waxa uu ahaa xiddig ka tagay kooxda waxana aan u rajaynay nasiib wacan markii uu kooxda ka tagayay”.
“Tan ilaa wakhtigaas ma jiro wax kale oo dhacay”.
“Ma doonayno in aanu la galno muran ku saabsan wax uu qof ka yiri xiddiga aan ahayn xiddigahayaga”.
Madaxweynaha kooxda PSG ee Nasser Al Khelaifi ayaa u duulay Brazil si uu ula kulmo Neymar xlli uu xiddigu dhaawacan yahay xilli ay wararka qaar sheegayaan in uu safarku yahay mid sama fal ah iyo shaqo ah.